U-Amy Adams (igama eligcwele u-Amy Lou Adams), umlingisi wefilimu, i-Hollywood superstar, wazalwa ngo-Agasti 20, 1974 edolobheni lase-Italy laseVicenza.
Izingxabano zefilimu no-Amy zenzeke ngo-1999 ku-comedy ethi "The Beauty Killer" eqondiswa uMichael Patrick Giann. Adams Amy, ukuphakama kwakhe akudluli ku-163 cm (futhi cishe kufike endleleni yakhe), wadlala omunye wabahlanganyeli emncintiswaneni wokuhle, uLeslie Miller. Kwabe sekuyiminyaka embalwa, i-Adams iqhaza kumaphrojekthi ahlukahlukene we-TV, enza izindima zesibili. Kodwa-ke, ngo-2002, umdlali we-actress waba nengxenye eyamsondeza esiteji esiphezulu se-art cinema. Umlingiswa wakhe - uBrenda Strong kumculi we-detective "Ngibambe Uma Ungakwazi" - wayefuna isimo sengqondo sokucabangela isithombe, futhi i-Adams yabhekana nomsebenzi wayo. Phakathi kwezinye izinto, umlingisi osemusha waphefumulelwa ukuba khona kwezinkanyezi ezifana noTom Hanks, uLeonardo DiCaprio noMartin Sheen, kanye noSteven Spielberg, umqondisi wefilimu.
Udumo lweqiniso u-Amy Adams wathola ngemuva kokukhishwa kwefilimu ethi "June Beetle" eqondiswe uPhil Maurisson. Lesi yisithombe esinabantu abaningana abaqoqiwe endaweni eyodwa, badutshulwe enhlobonhlobo yezingxabano zomndeni ezilukhuni kanye nesethi yonke yokuthokoza kwengqondo. U-Amy waba neqhaza elihola, wadlala u-Ashley Johnsten, umkami okhulelwe wezinye iziqhawe zefilimu. Ngenxa yokusebenza kwakhe okuhle, umlingisi wathola imiklomelo engu-7 evela ezihlanganisweni ezihlukahlukene kanye nokuphakanyiswa kwamane, enye yawo eyayi-Oscar. Indima eyinhloko elandelayo ka-Amy Adams, ifilimu eyaqala ukugcwalisa kancane kancane, yadlala ebhayisikobho ye-movie ethi "Enchanted" umqondisi uKevin Lim ngo-2007. Isithombe siyadutshulwa ngohlobo lwefantasy yomculo. U-Amy wadlala indodakazi yenkosikazi uGiselle, othanda ukungena e-New York. Ukuze uthole isithombe esithembekile, uGiselle Adams wakhethwa i-Golden Globe.
Ngomsebenzi wakhe ngamunye, u-Amy wazama ukwenza inothi lokuthakazelisa nokumnandi, kungani enedumela lomdlali ojabulayo, ongenakuziqhenya. Kodwa-ke, ngo-2008, i-Adams yadlala kude nendima engenakunqabile kule filimu "Ukungabaza". Kwadingeka ukuba aphinde aphinde aphinde abe ngunodade wezinsizwa okuthiwa uJames, omunye wabafundisi bezikole lamaKatolika eNew York, osola ukuthi umfundisi wonakalisa abafundi futhi wanquma ukuqhuba uphenyo ukuze alethe umfundisi ongenalwazi wesonto emanzini ahlanzekile. Ngoba indima kaDade James Amy Adams iphinde iphakanyiselwe i-Oscar ne-Golden Globe.
Izingxabano mayelana nomdlali we-actress
Ngesikhathi i-movie "Night at the Museum" neBen Stiller no-Amy Adams yaqala ngo-2009, impi yangempela yemibono yaqala ngokulingana nobuntu buka-Amelia Earhart ekusebenzeni kuka-Amy. Futhi nakuba abagxeki bengenakuphikisana, noma nini nanoma yisiphi isizathu, ngalesi sikhathi bekukhona ukuphikisana okusobala. Owokuqala ukuba nombono omuhle mayelana nomdlalo we-Adams uchaze uMichael Phillips wephephandaba iChicago Tribune. Uma uyihumusha, ivela: "... ifilimu iyashintsha ngokubonakala kuka-Amy Adams njengomshayeli we-Amelia Earhart, kusukela ebuhleni bayo isikrini siqala ukukhanya ...". Umlobi wezombusazwe u-Ty Barren wephephandaba iBoston Globe uthe: "... I-Erhart ekusebenzeni kwe-Adams - lokhu akuyona into ebaluleke kakhulu, akukona okwanele ukwenza iqiniso ...". ULael Lowvelstein we-Variety uthe lo mdlali "uzimisele kakhulu". Umqondisi uSean Levy waphawula ukuthi, ngokombono wakhe, eHollywood namhlanje akukho mdlali ongcono kakhulu kunomlingani u-Amy Adams. Ubani onyakeni owodwa ongakwazi ukwenza izindima ezinkampanini ezintathu ezinzima kakhulu - "Ubusuku eMyuziyamu", "Ukungabaza" no "Julie noJulia"? Uhlu lokubamba kwentombazane alunamkhawulo, futhi amafilimu ayenama-Amy Adams asesidingo esikhulu.
Ku-comedy yothando "Indlela yokushada izinsuku ezintathu" eqondiswa u-Anand Tucker, u-Amy wadlala indima eyinhloko, u-American Anna Brady, owaqala ukusebenza ngezinhloso zakhe ngosuku lukaFebruwari 29. Kulolu suku, owesifazane unelungelo lokwenza isipho kumuntu akhethiweyo, futhi ngeke akwazi ukunqaba. Lesi siko sisebenza kuphela eNgilandi nase-Ireland. Kodwa-ke, u-Anna akazange aphumelele, ngenxa yezimo, uhambo lwakhe oluya ephusheni lwaqhubeka.
I-movie ethi "Fighter", idutshulwe ngo-2010 nguDavid O. Russell, lapho u-Amy Adams adlala khona noCharlene Fleming, intombi yombhokisi wezinkampani uMickey Ward, waletha lo mdlali wesigameko ngokuthi "Oscar", "i-Golden Globe" ne-BAFTA.
Ngonyaka ka-2012, u-Amy wadlala indima kaPeggy Dodd, umkami owedlula umdali wenhlangano yenkolo ethi "Origins" Lancaster Dodd. Futhi, ngenxa yamakhono akhe abenzayo, u-Adams wanikezwa ukuphakanyiswa okulandelayo kwe-Oscar, i-BAFTA ne-Golden Globe. Ngaphambi kokuba iphrojekthi ethi "Fighter" u-Amy amnike imvume yokuhlanganyela ekuqopheni i-movie ethi "Superman: Umuntu Wensimbi," lapho ezobonakala khona njengoLois Lane, intombi kaSuperman. Njengoba umkhiqizi wesithombe uChristopher Nolan eqinisekisile , bese uZak Snyder naye emsekela kulokhu , akakwazi ukuthola iLois engcono kakhulu. Indima yeLane ihlose abadlali abangu-9 baseHollywood, abavela kuRachel McAdams bese bephela noMila Kunis, kodwa njengoba kuphawulwe uSnyder, uLois Lane uzokwazi ukudlala u-Amy Adams kuphela. Ukubamba iqhaza kwakhe kule phrojekthi kungena eziyishumi eziphezulu.
Indawo yaseshashalazini e-Central Park
Ehlobo lika-2012, u-Amy Adams, owayengumdwebo we-filmography, wayeseqhamuka endaweni yesehlakalo, edlala indima yomkakho kaB Baker ngesikhathi esebenza ngokumculo "E-Woods", okwakunqunyelwe ukuhambisana nomkhosi "uShakespeare ePark." Lo mkhosi wokudala uqhutshwa minyaka yonke eCentral Park yaseNew York, eDelacorte Theater. Ngenxa yesimo sezulu esibi, ukusebenza okuhleliwe ngoJulayi 23, kwakufanele kuhlehliswe, kodwa ngosuku olulandelayo umculo wawubanjwe. Umdlali we-actress wayejabule kakhulu enkundleni entsha futhi wanquma ukubamba iqhaza emibonweni yezemidlalo yasepaki njalo ngonyaka.
U-Amy Adams, u-filmography wakhe uhlanganisa izithombe ezingaphezu kuka-50, ulindele ukuphinda kabili eminyakeni eyishumi ezayo. Lolu hlu lubandakanya amanye amafilimu ngokuhlanganyela komdlali we-actress kusukela ngo-2000 kuze kube manje:
Unyaka ka-2000 - "Enchanted", oqondiswa nguConstance Burge / uMaggie Murphy.
Unyaka ka-2001 - "Izimfihlo Zase-Smallville", eqondiswa nguJerry Siegel / Judy Melville.
Unyaka wezi-2002 - "Abakwa-Scammers", eqondiswa nguReginald Hadlin / Keith.
Unyaka ka-2003 - "Ithanga", eqondiswa u-Anthony Abrams / Alex.
Unyaka ka 2004 - "Udokotela Vegas", oqondiswa nguDavid Nutter / Alice Doherty.
Unyaka ka-2005 - "Ihhovisi", eliqondiswa nguRicky Gervais / Cathy.
Unyaka ka-2006 - "Othandana naye," oqondiswa uJese Peretz / Abby March.
Unyaka ka-2007 - "Impi kaCharlie Wilson," eqondiswa nguMike Nichols / Bonnie Bach.
Unyaka ka-2008 - "Shanyisa ukukhanya," eqondiswa nguChristine Jeffs / Rose Lorkowski.
Unyaka ka-2009 - "uJulie noJulia", eqondiswa uNora Efron / Julie Powell.
Unyaka ka-2009 - "Moon Serenade", eqondiswa uGiancarlo Tallarico / Chloe.
Unyaka ka-2010 - "U-Year Leap", oqondiswa u-Anand Tucker / u-Anna Brady.
Unyaka ka 2010 - "Fighter", eqondiswa nguDavid O. Russell / Charlene Fleming.
Unyaka ka-2011 - "Endleleni", eqondiswa nguWalter Sullis / Jane Lee.
Unyaka wezi-2012 - "Master", oqondiswa nguPaul Thomas Anderson / Peggy Dodd.
Unyaka ka-2012 - "Ibhola Eliphelile", eliqondiswa uRobert Lorenz / Miki.
Unyaka ka-2013 - "Yena", oqondiswa uSpike Jones / Amy.
Unyaka ka-2013 - "I-Scam eMelika," eqondiswa nguDavid Owen Russell / Sidney.
I-Superstar u-Amy Adams, ongubuciko bakhe obungenalo amakhasi omuntu siqu noma obuseduze, akalokothi akhangise abantu ababaziyo. Nakuba engazifihla, okokuqala, ngoba akukho okuzofihla. I-Adams ithandana amanoveli angabalelwa eminwe yesandla esisodwa. Ekuphileni kwakhe, i-cinema yayihlala yindawo yokuqala, futhi ngaleso sikhathi, ngesikhathi sakhe sokuphumula, ayengakwazi ukuthenga okuthile. U-Amy Adams, isithombe sakhe esisezindabeni zamamagazini agxilile akhangisa abalandeli abangamakhulu emadodeni, kodwa, behlala behola indlela yokuphila evinjiwe.
Ngentwasahlobo ka-2008, lo mdlali wamemezela ukusebenzisana noDarren Le Gallo, umdlali nomculi. Bahlangana ngo-2001, ngesikhathi sokusebenza, futhi bashada eminyakeni eminingi kamuva. NgoMeyi 2010, lo mbhangqwana unendodakazi, abayibiza nge-Avian Olea Le Gallo.